🥇 ▷ iPhone 6s, 3 sababaha aad u niyad jabi karto ✅
iPhone 6s, 3 sababaha aad u niyad jabi karto
Daciifnimada suurtagalka ah ee iPhone 6s cusub
Waxaan nahay taageereyaasha AppleWe waxaan jecel nahay sumadda iyo inbadan oo horumarinteeda ah iyo soo jeedinno cusub, laakiin waxaan sidoo kale ognahay sida loo aqoonsado marka ay jiraan waxyaabo aan si wanaagsan u shaqeynaynin. Halka Waxaan sugeynaa soo bandhigida iPhone 6s cusub iyo iPhone 6s Plus bisha Sebtember 9Waxaan sidoo kale daryeelaynaa seddex sababood oo cudur daar u noqon kara niyad jab ku dhaca moodooyinka cusub ee qoyska iPhone.
In kasta oo kororka awoodda iyo camera-ka cusub ee 12-megapixel iSight ay yihiin sababihii ugu fiicnaa ee loo sugi lahaa iPhoneka cusub, waxaa sidoo kale jira dhinacyada qaarkood oo si fiican u soo afjari kara taageerayaasha niyad jabsan ee aaladaha mobilada cusub ee Apple.
In kasta oo ay jiraan cabashooyinka, Apple waxay sii wadi doontaa sharadinta booska kaydinta ee la dhimay oo ah 16 GB. Phil Schiller, oo ka mid ah agaasimayaasha Apple, wuxuu ku celceliyay dhowr jeer in qaddigan boosku ka badan yahay ku filnaanshaha qalabka waxqabadka hooseeya.
Waxay sidoo kale kuu sheegi doonaan in macruufka 9 uu yahay mid wax ku ool ah isla markaana ay iCloud si fiican u shaqeyso oo aad u fiican, laakiin runtu waxay tahay haddii waxa aad sugaysay uu ahaa iPhone 6s oo leh meel badan oo wax lagu kaydiyo, waa inaad ogaataa in nooca ugu dhaqaala badan waxay lahaan doontaa 16 GB oo boos ah mana laha 32 GB, sida ilaa iyo hadda la sheegayo.
Hadda oo aad ku duubi karto fiidiyowyo 4K ah Booska kaydinta wuxuu ku qaylinayaa dib-u-cusboonaysiin, laakiin tan iyo Apple Waxay doorbidaan inay sii wadaan sharadka ku jira noocyada 16 GB si loo yareeyo kharashyada.
Qaybta ugu xun ayaa ah in nooca 32 GB mar kale laga saari lahaa, oo si toos ah loogu boodi karo nooca 64 GB, halkaasna haddii aan ka hadlayno qaddarka meel kaydinta ah ee isticmaaleyaasha caadiga ahi aysan aad u daneyneynin inay helaan.
Nabad gelyo safiir u eg shaashad
Daboolida safka safarka loo adeegsado looma adeegsan doono iPhone 6s cusub iyo iPhone 6s Plus. Taabadalkeed, Apple wuxuu doorbiday dhalada ionized (galaaska ion-X). Waxay bixisaa ilaalin iyo tayo wanaagsan, laakiin waxaa jira kuwa filayay safayr inay hubiyaan xitaa qaab iyo ilaalin intan ka sii badan.
Naqshadeynta iyo midabka
Qaabka dibedda ee labada qalabba. iPhone 6 iyo iPhone 6s, waa isku mid. Xaqiiqdi waxaa jira isbeddelo aad u yar oo dhumucdiis leh, sababtuna tahay ku darista teknolojiyadda cusub ee cusub ee loo yaqaan ‘Force Touch technology’ oo u baahan aalad xoogaa xoog badan. Laakiin haddii aad filaysay inaad naftaada ku kala duwanaato waxyaabaha kale ee naqshadaynta, waa inaad ogaataa in iPhone 6s iyo iPhone 6s Plus ay leeyihiin ku dhawaad ​​kiisas isku mid ah marka loo eego moodooyinka la sii daayay sanadkii hore. Dhanka midabka, Dahabka Dahabka ah ama Dahabka Dahabka ah ayaa la sheegay, laakiin waa inaadan filanin wax cillad leh, laakiin taa beddelkeeda oo leh hooska guduudka ah, wax muuqda oo muuqda.
Kuwani waa saddexda astaamood ee waaweyn ee sababi kara in soo-jeedinta Sebtember 9 ay kuu dhammaato niyad jab. Adiga maxaad ka fileysaa iPhones 6s cusub iyo iPhone 6s Plus?